I-Eden Cottage, i-Eden Cottages ezi-2, iCorby encinci
I-Eden Cottage yindlwana eyonwabisayo eyahlaziywa ngokupheleleyo ngoMeyi ka-2018.
Ikhitshi entsha yesitayile seshaker ifakelwe izixhobo zombane ezisemgangathweni.
Kukho amagumbi amabini okulala, enye inebhedi ephindwe kabini 4 ft 6 intshi kunye nenye ene-double 4ft encinci.
I-Cottage yayikhe yaba yindlu yabathungi kwaye yakhiwa ngenkulungwane ye-18.
IsiXeko saseCarlisle sikwiikhilomitha ezi-5 kude.
I-Eden Cottage ikwindawo efanelekileyo yokuhlola iSithili saseNyakatho yeLake, imida yaseScottish, iSolway Coast kunye noDonga lweHadrians.
I-Eden Cottage yindawo eyonwabisayo enamagumbi amabini okulala. Indlu encinci ihleli kwikona kwibala elifunwa kakhulu kwilali yaseLittle Corby, ibekwe kwindawo efanelekileyo kwisiXeko esiyimbali saseCarlisle kunye neHadrian Wall. Indawo ayinakuba ngcono kuyo nayiphi na into onomdla kuyo, ukusuka kuhambo lwelizwe olukhulu, iCarlisle, iHadrian Wall kunye neSithili seLake...
Yi-Cottage enobuhlobo nezinja. Info re izinja kwi 'Imithetho House'. Enkosi.
ICorby encinci yilali eyonwabisayo. I-Otter Inn yamkelekile kakhulu kwaye iku-20 yds kude. Ivenkile yeCo-op ikude ngeemayile eziyi-0.5. Kukwakho neSallys Tea Room ekwakumgama oziikhilomitha eziyi-0.5.
Ilali yaseWetheral ikumgama oziikhilomitha ezi-1.5. Ipabhu yelali, iWheatsheaf inika ukutya okumnandi. Indawo yokutyela yeFantails ejonge uhlaza kwilali ikwalungile kakhulu. Kukwakho nePost Pot Café ejonge uhlaza lwelali kwaye kufanelekile ukutyelelwa. Kukwakho iklabhu yezempilo kunye nezolonwabo e-Crown.
Sifumaneka nangaliphi na ixesha kuyo nayiphi na imibuzo okanye imibuzo.
USandra 077 154 16705
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Little Corby